Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ahụike » Nkpuchi dị oke egwu n'agha a na -eri nri dị ize ndụ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Education • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • Israel Na -agbasa Akụkọ • News • Tourism • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Enwere ihe karịrị otu ụzọ iji eri nkpuchi.
N'ụlọ akwụkwọ elementrị dị na steeti Washington, USA, onye isi gwara ndị nne na nna ka ha gwa ụmụ ha na ha ga -eyi ihe nkpuchi mgbe ha na -eri nri ehihie n'ụlọ nri - oge niile ha na -eri nri. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, were ndụdụ, belata nkpuchi gị, rie aru, bulie nkpuchi gị, taa, loda, megharịa.
Iwu nke ụlọ akwụkwọ maka iyi nkpuchi COVID-19 na-ekwu na ekwesighi iyi ihe mkpuchi ihu mgbe ị na-eri nri.
Onye na -ahụ maka redio Jason Rantz wetara ọha mmadụ ozi a site na ihe ngosi redio AM na KTTH na Seattle.
O nwetara otu ozi email zigara ndị nne na nna n'aka nna nwere nchegbu nke kwuru na oge nri ehihie bụ oge dị ize ndụ.
Email ahụ sitere n'aka onye isi ụlọ akwụkwọ Geiger Montessori Electionary School na Tacoma, Washington, Maazị Neil O'Brien ka ezigara ndị nne na nna ka ha wee melite ha na amụma COVID-19 nke ụlọ akwụkwọ ahụ. Email ahụ kwuru n'otu akụkụ: “Ụmụaka kwesịrị iyi mkpuchi ihu n'oge nri ehihie. Ha nwere ike wedata ya ka ọ taa ma ọ bụ drinkụọ ihe ọ andụ ,ụ, wee bulie ya ka ọ taa ata, loda ma ọ bụ kwuo okwu. ”
Onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ gara n'ihu ịkọwa na ozi -e na n'agbanyeghị na ụlọ oriri na ọ hasụ hasụ nwere "sistemụ ikuku dị egwu" na ụmụ akwụkwọ nọ ebe dị anya, "anyị kwesịrị iwere nri ehihie dị ka oge dị ize ndụ nye mmadụ niile."
Dabere na webụsaịtị Tacoma Public Schools, the Covid-19 Iwu na -ekwu na ụmụ akwụkwọ, ndị ọrụ na ndị ọbịa "ga -eyi ihe nkpuchi n'ime ụlọ, belụsọ mgbe ha na -eri nri."
Ụlọ akwụkwọ ọha nke Tacoma wepụtara nkwupụta na -akọwa na nkọwa onye isi O'Brien banyere ntuziaka ha karịrị ebumnuche. Nkwupụta ahụ na -agụ:
“Ejiri ezi okwukwe tọọ ntọala Geiger dị ka nkọwa nke ntuziaka ngalaba ahụike iji kpuchie nkpuchi mgbe 'na -eri nri.' Na ịlele ngalaba ahụike, ụkpụrụ ahụ gafere ebumnuche ha. Anyị agaghị adọ ụmụ akwụkwọ ọ bụla aka na ntị maka na ha eyighị ihe mkpuchi ihu n'etiti ata. ”
Ọ bụghị oge mbụ maka oke nkpuchi
Laa azụ na Ọktoba 2020, Gavin Newsom, Gọvanọ California, biputere tweet banyere iri nri n'ụlọ nri. Ọ sịrị: “Isoro ndị ezinụlọ gị na -eri nri na ngwụsị izu a? Echefukwala idobe nkpuchi gị n'etiti ọtịta. ”
Ọ gbakwụnyere ọbụna katoonụ ihe atụ nke nwa agbọghọ na -eyiri ihe nkpuchi ya, wepụ ya ka ọ rie, ma weghachi ya ọzọ maka ọtịta ọ bụla. Ihe tweet sere ngwa ngwa iwe na nzaghachi na -akpọ okwu Gọvanọ nzuzu.
Gọọmentị mere ka o doo anya na mgbe ị na -eri nri n'ụlọ nri, ndị mmadụ kwesịrị iyi ihe nkpuchi mana ọ bụghị mgbe ha na -eri nri ma na -a drinkingụ - nkọwa ọzọ: ọ bụghị n'etiti ọtịta ọ bụla.
Na Njem akpaaka
N'Israel, e mepụtara ihu nke na -abịa na njikwa anya. Ọ na -enye ndị na -eri nri ohere iri nri na -ewepụghị nkpuchi ha. Enwere ike iji nkpuchi mepee nkpuchi ahụ ma ọ bụ ihe mkpuchi ga -emeghachi omume na -akpaghị aka mgbe ọ hụrụ arịa dị nso na mmeghe nkpuchi. Ihe dị mkpa bụ nne mepụtara ihe.
Ndị ọrịa ara ara nwere ike ịzere ugbu a ...